Zvese iPadOS Zvimiro | IPhone nhau
Zvese iPadOS zvimiro
iPadOS, iro zita rinogamuchira iyo nyowani vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu yePadad iyo ichavhurwa munaGunyana, inosanganisira huwandu hwakanaka hwezviito izvo zvichatibatsira kuita mabasa nekukurumidza uye nekudaro kukwanisa kuita basa redu zvakanyanya. Zvimwe zvezviitwa izvi zvatove kuzivikanwa, asi mazhinji acho matsva chose uye anosanganisira mashandiro acho zviri nyore kwazvo kuti iwe uzive kana iwe uchida kushandisa yako iPad pane zvinopfuura kungodya zvemukati.
Zviratidzo zvekuteedzera, kucheka uye kunama pasina chikonzero chekushandisa mamenyu ezvinyorwa, kana kugadzirisa uye kuitazve zviito, kudzikisa saizi yekhibhodi, kana kusarudza izwi, mutsara, kana ndima yese Iyi ingori mimwe mienzaniso yezvaunogona kuona muvhidhiyo iyi uye isu tichazokutsanangurira iwe muchinyorwa chino. Apple pakupedzisira inotipa iyo inoshanda sisitimu padanho reizvo iyo iPad inokodzera, urikuzoishandisa zvakanyanya?
1 Sarudza zvinyorwa
2 Kopa, Cheka uye Namatira
3 Sunungura uye Redo
4 Kubuda ropa
6 Shinya khibhodi
Tinogona kukanganwa nezve yegirazi yekukudza yegirazi yakaonekwa kana ichifambisa chiya. Iye zvino unofanira kungoita bata iyo cursor neumwe munwe uye uidhonza mhiri kwechidzitiro kuzviisa patinoda. iPadOS inotibatsira nekutangisa kwatinoda kuiisa. Kune zvakare matsva matsva kusarudza mazwi:
Batisisa pane izwi kwechipiri kuti uzvisarudze, kana kuribata zvakaringana kaviri mumutsara.
Dhonza sarudzo kuti uwedzere kana kuidzikisa.
Tora kaviri izwi kuti usarudze mutsara wese urimo.
Katatu pombi pazwi kuti usarudze iyo ndima yese irimo.
Iwe unogona zvakare kubata wechipiri pane izwi uye wobva wangodhonza kuti usarudze iwo mavara aunoda. CNezviratidzo zvese izvi pamwe chete nenzira pfupi dzekhibhodi, kana tikashandisa yekunze, basa rekusarudza zvinyorwa rinofambiswa zvakanyanya, tichivandudza kunyange izvo zvatingaite pane chero komputa.
Kopa, Cheka uye Namatira
Tinogona kuenderera mberi tichishandisa zvakajairika pfungwa mamenu kukopa nekuteedzera, asi zvakare izvozvi tine mamwe manongedzo atinogona kuzviita nekukurumidza. Kana tangosarudza chinhu chiri mubvunzo tinokwanisa kuita chiratidzo che isa minwe mitatu pamwechete kuti uikopi. Kana tikazvidzokorora zvakare panzvimbo yekuteedzera tinozvicheka, saka ichanyangarika kubva kwayiri. Kuti tinamate isu tinofanirwa kuisa iyo cursor munzvimbo yaunoda uye kuita chiratidzo chekuparadzanisa minwe mitatu.
Sunungura uye Redo
Kana isu tadzima kana kugadzirisa chimwe chinhu uye isu tichida kugadzirisa iri rekupedzisira basa, isu tinongofanirwa kuita chiratidzo chekutsvaira kuruboshwe neminwe mitatu. Kana tikazvidzokorora, isu tichagadzirisa shanduko dzekupedzisira dzatakaita mukudzokorodza kurongeka. (kubva kuchangobva kuitika kusvika kudangwe). Kuitazve chimwe chinhu chatakabvisa isu tinofanirwa kuita chiratidzo chekumashure: neminwe mitatu yekutsvedza kubva kuruboshwe kurudyi.
Isu tinogona kuita nekukurumidza mitezo yekumisikidza induction mazinga mune runyorwa rwatakasika. Ingo tsvaira kubva kuruboshwe uchienda kurudyi nemumwe munwe pane icho chinhu kuwedzera induction, kana zvinopesana kuti uderedze.
Kunyangwe isu tichakumikidza chakazara chinyorwa kuita multitasking pane iyo iPad, zvakakosha kuti uzive zvimwe zviito zvine chekuita nazvo. Kuti tivhare app tinofanirwa kungoita chiratidzo che isa minwe mishanu pamwechete pachiratidziri. Kana isu tichida kukurumidza kuwana multitasking nemaapplication ese atakavhura, isu tinofanirwa kusvetuka kumusoro nezvigunwe zvina.
Pane dzakawanda nguva isu hatidi keyboard yakakura seiya iyo iyo iPad inogara iripo, uye Apple inotipa mukana wekudzikisa iyo kune saizi yeiyo iPhone keyboard, kuti tigone kuibata nayo neruoko rumwe. Iwe unofanirwa kuita iko kunongedzera neminwe miviri pane iyo keyboard uye tichaona kuti yakaderedzwa sei, ichitipa imwe yemahara skrini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Zvese iPadOS zvimiro
Dr. Panda Padziva rinowanikwa mahara kwenguva yakati rebei
Apple yekuvanzika-yakanangana neshambadziro yakarova Canada